Imibhalo Yezichibiyelo Zokushintsha Imininingwane Yezinkampani Ezirekhodiwe
Kudingeka i-athikili yokuchitshiyelwa ukuze kuguqulwe imininingwane erekhodiwe mayelana nenkampani yakho. Lo mbhalo ufakwe ehhovisi likanobhala wombuso wakho, ngendlela efanayo nokufakiwe. Izizathu eziyinhloko zokugcwalisa izindatshana zokuchitshiyelwa kwezinkampani yilezi:
Shintsha Igama Lenkampani
Shintshela kokuthi Inani Lamasheya Agunyaziwe
Shintshela ku-Par Value of Corporate Shares
Ukungeza noma Ukususa Abaqondisi, Izikhulu, Abamasheya
Imibhalo yokuchibiyelwa ifayilisiwe futhi yarekhodwa izinguquko emibhalweni yakho yokufakiwe. Izinkampani Ezihlanganisiwe zizokusiza ekulungiseleleni nasekuhanjisweni kwezindatshana zokuchitshiyelwa kunoma yiziphi izifundazwe ze-50.
Imibhalo ye-Amendment Filing inqubo
Ungashayela Izinkampani Incorporate futhi u-oda i-athikili yenkonzo yokuchitshiyelwa futhi umnyango wethu wezomthetho uzolungisa amadokhumenti akho. Ungabuyekeza futhi usayine ukuchibiyela kwakho futhi, uma usuvunyelwe, sizofaka izindatshana nehhovisi lakho lesifundazwe. Ngokuvamile, zonke izifundazwe zizokwehluka ngezikhathi zazo zokufaka, kepha-ke, lapho sekugcwaliswe amarekhodi wakho wenkampani kufanele kuvuselelwe ngokulungiswa.
Imibhalo Yezinsizakalo Zokuchibiyela
Ukhokha imali ekhokhwayo ye- $ 199 kanye nemali yokugcwalisa yesifundazwe sakho kuyo yonke inqubo futhi amarekhodi akho enkampani azoshintshwa kusinyathelo esisodwa esilula.